Trolley nke Platform
PA mini eletriki elu
Igwe ọkụ eletrik CD1
Igwe ọkụ eletrik na -ebugharị
Ngọngọ agbụ aka
Trolley aka n'elu ikpo okwu
Ihe mgbochi aka
Igwe ndọta na -adịgide adịgide
Trolley (elebara anya, ọkụ eletrik)
80 ọkwa ọkwa
Ụgbọ ala pallet nwere akpịrịkpa
Ihe mkpuchi eletrik DHS
CD/MD eriri eriri eletriki ikuku
Obere ọkụ eletrik
Trolley aka Platform
1.Zinc plated handle
2.Plastic n'elu ikpo okwu
3.Front n'usoro nke isiike Pu rim eyi isi casters
4.Azụ azụ nke swivel PU rim PP isi casters
5.Caster nwere igwe na-asachapụ uzuzu & ndụdụ chrome
6.Ojiji eji eme ihe
Ụgbọ ala n'elu ikpo okwu bụ otu n'ime ngwa eji ejikwa ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe na nnukwu ụlọ ahịa. Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị bụ isi iji ghọta njikwa ibu. Ọ nwere njirimara nke nhazi dị mfe na ịdị arọ.
Trolley n'elu ikpo okwu nwere ike iburu ngwongwo ngwa ngwa, nke bụ ụdị ngwa njem dị larịị.
Ọdịmma ya na arụmọrụ bara uru na arụmọrụ pere mpe dabara adaba maka obere njem mkpirikpi nwa oge n'okpuru ọtụtụ ọnọdụ, yabụ ejiri ya mee ihe na gburugburu ọrụ dị iche iche.
Hebei Juren Hoisting Machinery Co., Ltd. dị na Donglv, District Qingyuan, Baoding City, Hebei Province, nke ama ama maka ịkwalite ngwaọrụ. E hiwere ya na 1992. Site na mmepe ihe karịrị afọ 25, ọ zụlitela ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọkachamara pụrụ iche nke a na -akwanyere ùgwù nke nwere ezigbo aha dị ka ndị na -emepụta ihe ọhụrụ, ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na -ebuli igwe.
Anyị bụ ndị nrụpụta igwe na -ebuli elu, dị ka igwe eletriki eletriki, ngọngọ yinye, ihe mgbochi lever, gwongworo pallet na ihe ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike iwepụta ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ igwe na -agbachitere ọkọlọtọ dị ka atụmatụ ndị ahịa si dị, ma na -eme ụkpụrụ ụlọ ọrụ siri ike.
Ngwaahịa anyị ebupula ihe karịrị mba na mpaghara iri abụọ dịka East Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Brazil, Africa, South America na ndị ọzọ. The kwa afọ mmepụta uru esịmde 120 nde yuan.
Ụlọ ọrụ anyị na -akpachapụ anya mgbe niile n'ịhụ nchekwa na afọ ojuju ndị ahịa. Anyị gbasoro amụma ebumnuche nke kacha mma na injinịa yana ịga n'ihu na ọganihu na teknụzụ. Ime ka ndị ahịa anyị nwee afọ ojuju bụ ebumnuche ikpeazụ anyị. Anyị ga na -enye gị ọnụ ahịa kacha mma, ezigbo mma na ọrụ kacha mma!
Ngalaba teknụzụ nke Platfrom Trolley/gwongworo
Efere efere (cm)
Akụrụngwa nke wiil
AHỤ ỤLỌ AGBANYE NA -ADỊGHỊ
ỤBỌCHỊ RUBBER RUBBER
AHỤ ỤLỌ ECHICHE EKPERE
5 ”nylon wiil
5 ”wiil roba
5 ”wiilị PVC
Nke gara aga: 100% Ụlọ ọrụ mbụ 6 Ton Chain Fall - HSH lever block - Juren
Osote: CD/MD eriri eriri eletriki ikuku
Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Bannon Electric Hoist, Micro Electric eriri eriri, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Lever Puller,